သစ်ခက်သံလွင်-ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုမှတ်တမ်း၊ စိုးလွင် -ကျနော်နဲ့ဝမ်ခ(ဟောင်း)တိုက်ပွဲ- ၂
on July 04, 2016 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Variety
ကျနော်နဲ့ ၀မ်ခ (ဟောင်း) တိုက်ပွဲ -၂
ရန်သူရဲ့တိုက်နည်းက သူ့ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့တွေကို ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ဖိပစ်ထားချိန်မှာ သူ့ရဲ့ချေမှုန်းရေးတပ်တွေက ကျနော်တို့နဲ့လက်တကမ်းအကွာ ခြံစည်းရိုးနားကို ကပ်ထားရမှာပါ။ လက်နက်ကြီးပစ်တာရပ်တာနဲ့တပြိုင်တည်း သူ့ရဲ့တပ်တွေက ပစ်တက်တက်ပြီး ကျနော်တို့ကို ချေမှုန်း ရမှာပါ။ ရန်သူနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ကိုက် ၅၀ အကွာအဝေးလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် ....
(နောက်မှ သိရတာက တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာ သွားတိုက်ချင်လို့ ကျည်ဆန်လိုတဲ့လို့ လာလိမ် တောင်းပြီး ထိပ်တိုက်နေရာတွေမှာ သွားတိုက်နေကြတာ)
(ကျနော်တို့နဲ့တွဲတိုက်နေတဲ့ KNU ရဲ့ အထူးတပ်ရင်း(၁၀၁)က ရဲဘော်တွေဟာ အင်းစိန်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် သားတွေများလို့လားမသိ ကျနောတို့ဗမာ့တွေအပေါ် နားလည်းပြီး ပေါင်းသင်းလို့ ကောင်းတယ်..။ ကျနော်တာဝန်ထမ်းဖူးခဲ့တဲ့ မာနယ်ပလော တပ်မဟာ(၄) တပ်မဟာ(၃)က ကရင်ရဲဘော်တွေထက် ပိုကောင်းတယ်)
ကျနော်က ဘယ်နေရာမှာ တာဝန်ယူပေးရမလဲ မေးတော့..ကျနော့်ရဲ့ M.16 သေနတ်ကို ယူလိုက်ပြီး သူရဲ့ AK.47 သေနတ်ကို ကျနော့်ကို ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ညာတောင်ပန်.. သောင်ရင်းမြစ် ကမ်းဘေးကနေ ကပ်တက်လာမဲ့ ရန်သူကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ မသင်္ကာရင် ပစ်လို့လည်း အမိန့်ပေးထားတော့..မသင်္ကာတိုင်း တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ပစ်နေတော့တာပဲ..။
တချက်တချက် ကိုယ့်ဘေးနဲ့ အနောက်ဘက်တွေကြည့်မိတော့ လက်နက်ငယ်သံတွေ ဆူညံနေပြီး ရန်သူရဲ့ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် ဖုန်လုံးတွေထ၊ သစ်ပင်တွေလဲ၊ ကိုင်းတွေပြတ်ကျနဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် နှစ်လံကွာလောက်ဆို ဖုန်လုံးတွေကြောင့် လူလုံးမကွဲတော့ဘူး..။
ကျနော်လည်း တိုက်ပွဲနားတော့ ကိုယ့်ရဲဘော်တွေလိုက်ရှာတော့…တွေ့ပါပြီ။ ကိုစောထူးတို့နဲ့ပေါင်းပြီး တိုက်နေကြတာကိုး။ ကိုစောထူးလည်း ကျနော်နဲ့ ချစ်ပိုကိုတွဲပြီး ရန်သူ့ရဲ့အဓိက၀င်လမ်း ကားလမ်းမထိပ်မှာ နေရာပေးပါတော့တယ်…...။
KNU တွေလည်း ကျနော်တို့ကို ယုံသွားပြီလေ။ အရင်တုန်းက သူတို့က ကျနော်တို့ကို တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံမရှိလို့ထွက်ပြေးမှာကြောက်နေတာ…။ မူလရည်ရွယ်ချက် က ၀မ်ခ(ဟောင်း) ကို နှစ်ရက်ပဲ ခံတိုက်ဖို့ 101 KNU တပ်ရင်းမှူးဗိုလ်မှူးတောလှက စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်ဖောတိုကို အမိန့်ပေးထားတာ၊ အခုတော့ ကျောင်းသားတွေကို စိတ်ချရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ရက်မက ဆက်တိုက်စေတဲ့ဗျာ။
မနက် ၄ နာရီထိုးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ ရဲဘော်အားလုံး အဆင့်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ ရန်သူကလည်း လက်နက်ကြီးကို တလုံးချင်း ပစ်နေပါပြီ. စခန်းထဲမှာ တလုံးကျကွဲသံကြားတာနဲ့ နောက် တလုံး ပစ်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ပစ်နေကျပုံစံ။ တခါတလေ အချောင်ဖမ်းပြီး ကွဲသံနဲ့ရောပြီး တလုံးပစ် လွှတ်တတ်ပါတယ်။ တခါတလေ တလုံးထဲပစ်သလိုနဲ့ နှစ်လုံး သုံးလုံး တပြိုင်တည်း ပစ်တတ်ပါတယ်။
စခန်းအနောက်ဘက် သောင်းရင်းမြစ်ကမ်းခြေမှာ ရွာသားအချို့ကချက်ပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာတွေစီ ထမင်းထုပ်လိုက်ဝေတာပါ။ တယောက်ကို မနက်စာ ညစာအပြီး နှစ်ထုပ် သုံးထုပ် ပေါ့..။ ထမင်းထုပ်ထဲမှာ အများဆုံးပါတတ်တာက ငါးပိထောင်းပါ.။ တခါတလေ ကံကောင်းရင် ငါးခြောက်နဲ့ ငါးသေတ္တာ ပါတတ်ပါတယ်..။ ဒီအထဲမှာ ရဲဘော်တွေအမျှော်ဆုံးက ထမင်းထုပ်ထဲမှာ ပါတတ်တဲ့ စာတွေပဲ..။ ဒီစာတွေကို ကရင်ရွာတွေက ကရင်အမျိုးသမီးလေတွေ ငပိထုပ်တွေနဲ့ ရောပို့လိုက်တယ် ထင်ပါတယ်…။ ကံကောင်းစွာရရှိတဲ့ မောင်ကျောင်းသားတွေလည်း ကံဆိုးတယ် ပြောရမလားမသိ..၊ ရေးလာတဲ့စာတွေက ကရင်စာဖြစ်နေတော့ ဖတ်မတတ်..။ ဒီတော့ ဖတ်တတ်တဲ့ ကရင်ရဲဘော်လေး တွေကို ဖတ်ခိုင်းရတော့တာပေါ့။
ကဲ..ထမင်းစားတဲ့ကိစ္စတော့ပြီးပြီ။ ..ရန်သူမတက်ခင် အီးအီးပါတဲ့ကိစ္စကို လုပ်ရအုံးမယ်။
အီကွိမင့်ကို ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းမှာ ချွတ်ထား..။ ဘောင်ဘီးကျယ်သီးကိုဖြုတ်။ ဘောင်ဘီးနဲ့ စက္ကူကိုတဖက်ကကိုင်။ တဖက်က သေနတ်ကိုင်ပြီး ဘန်ကာနဲ့မနီးလွန်း မဝေးလွန်းကို ပြေးရပါတယ်။ နီးလွန်ရင် အနံ့ရမှာ စိုးလိုပါ. ဝေးလွန်းရင်လည်း ရန်သူ့လက်နက်ကြီးရန် ကြောက်ရပါတယ်။ လက်နက်ကြီးဟာ တလုံးချင်း မှန်မှန်ပစ်နေတဲ့အတွက် တလုံးနဲ့တလုံးကြားမှာ စက္ကန့် ၂၀ အချိန်ရပါတယ်။ ဒီ စက္ကန့် ၂၀ အချိန်အတွင်းမှာ အီးပါးတဲ့နေရာကိုပြေး၊ အီးပါ…၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘန်ကာဆီ အရောက်ပြေးပေတော့..။ စက္ကန့် ၂၀ အတွင်း ပြီးချင်ရင် ဒီလိုလုပ်ရပါတယ်။
အခုနကပြောခဲ့သလို ကြယ်သီးဖြုတ်ထားတဲ့ဘောင်ဘီးကိုတဖက်ကကိုင်၊ တဖက်ကသေနတ်ကိုင်ပြီး ရန်သူ့လက်နက်ကြီးကျည်အထွက်ကို စောင့်ရပါတယ်။ ထွက်ပြီးလို့ ကိုယ်စခန်းမှာကွဲပြီဆိုတာနဲ့ အီးပါးမဲ့ နေရာကိုပြေးပေးတော့။ ဒီအချိန်မှာ နောက်လက်နတ်ကြီးတလုံးက ထွက်လာပါပြီ်။ အီးပါးမည့်နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘောင်းဘီးချွတ် ထိုင်ချလိုက်တာနဲ့ အီးပါခြင်းအမှု ပြီးဆုံးရပါမယ်။ ဆိုလိုရင်းက ထိုင်ချနေစဉ်အတွင်း အီးပါးနေရမည်ဖြစ်ပြီး..ဖင်ထိုင်အကျမှာ ကိစ္စပြီးဆုံးပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။ ၀မ်းချုပ်နေလို့မရ၊ ညှစ်နေလို့မရ၊ ဒါ့အပြင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာလည်း စိန်ပြေနပြေလုပ်ဖို့ အချိန်မရပါ..။ စက္ကူ (သို့) တုတ်ဖြင့် ခပ်သွက်သွက်(ရှောင်လင်ကျောင်းထွက်တွေဆို ပိုမြန်မယ်ထင်တယ်) သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေမြောင်းရှိရာသို့ အလျှင်အမြန် ပြေးပေတော့..။
မကြာပါဘူး၊ မနက် ၅ နာရီခွဲ အလင်းရောင် ပျိုးတာနဲ့ ရန်သူ့ရဲ့လက်နက်ကြီးဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ရှေ့တန်း ဘန်ကာတွေဆီကို မိုးပြိုသလို ရွာချလာပါတော့တယ်။
ရန်သူရဲ့တိုက်နည်းက သူ့ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့တွေကို ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ဖိပစ်ထားချိန်မှာ သူ့ရဲ့ချေမှုန်းရေးတပ်တွေက ကျနော်တို့နဲ့လက်တကမ်းအကွာ ခြံစည်းရိုးနားကို ကပ်ထားရမှာပါ။ လက်နက်ကြီးပစ်တာရပ်တာနဲ့တပြိုင်တည်း သူ့ရဲ့တပ်တွေက ပစ်တက်တက်ပြီး ကျနော်တို့ကို ချေမှုန်း ရမှာပါ။ ရန်သူနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ကိုက် ၅၀ အကွာအဝေးလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် တခါတရံမှာ ရန်သူ့ရဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်ဟာ လွဲချော်ပြီး သူ့လူဘက် ပြန်ကျကာ ကိုယ်ကျည်နဲ့ကိုယ် သေကြေ ဒဏ်ရာ ရတတ်ပါ တယ်။
လက်နက်ကြီးအပစ်ရပ်သွားတာနဲ့ တပြိုင်တည်း ရန်သူ့ရဲ့ G3,G4,M.79 နဲ့ ခွင်းဗုံးပစ်သံတွေ ဆူညံစွာ ပေါ် ထွက်လာသလို ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း AK.47,M.16,R.P.G နဲ့ ဘဇူးကာ လက်နက်သံတွေ ပေါက်ကွဲ ထွက်လာပါတော့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးလည်း လက်နက်ငယ်သံ၊ ယမ်းခိုး၊ ဖုန်လုံး၊ သစ်ကိုင်းကျိုး အစတွေနဲ့ ဆူညံရှုပ်ထွေသွားတော့တာပဲ။
ကျနော်လည်း တိုက်ပွဲစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ မနေ့ကလောက် စိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်ပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ စိတ် လှုပ်ရှားနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ဒီပစ်ခတ်သံတွေကို ဂီတသံများ ထင်လာသလားမသိ မြူးကြွသလို ခံစားလာရတယ်..။ ဒီလိုခံစားရတာကို ကိုယ် တယောက်ထဲလားလို့ မသင်္ကာလို့ ကျနော်နဲ့တွဲဘက် ချစ်ပိုကိုကြည့်လိုက်တော့.သူလည်း ကိုယ့်အတိုင်းပဲ မြူးကြွနေတယ်။ သူပစ်နေတဲ့အချိန် ကိုယ်က ဘန်ကာဘေးနားမှာ ကနေ.. ကိုယ်ပစ်နေတဲ့အချိန် သူက ဘန်ကာဘေးနားမှာ ကနေ..၊ စည်းချက်ကိုကျလို့..။ ဒီမှာမေးစရာရှိတာက မင်းတို့က ရုပ်ရှင်ထဲမှာလို သေနတ်ကြီးကိုပိုက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပစ်သလားလို့မေးလာခဲ့ရင်.. မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေရမှာဖြစ်သလို..ရန်သူစစ်သားတွေဟာလည်း ရန်ကုန်မှာ အရေးအခင်းနှိမ်နင်းသလို သေနတ်ကြီးပိုက်ပြီး ပစ်တက်တက်မလာပါဘူး။ မြေပြင် ကို ရေပြင် မှတ်ပြီး ကုတ်ကပ်ပြီး တက်ရတာပေါ့ဗျာ...။
ကျနော်တို့ကလည်း ပစ်ကျင်းကနေ ခေါင်းဖော်ရုံလေးဖော်ပြီး ပစ်ရတာပေါ့။ တချက်တချက် ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေထဲက ရန်သူကို “ဟေ့ကောင်တွေ ရန်ကုန်မှာပစ်သလို ပစ်တက် တက်လာလေ..ဘာလဲ ခုမှကြောက်နေပြီလား” လို့ အော်ကြတယ်…။ ဒီလိုအော်နေတာကို ကိုစောထူး(ကေအန်ယူ) ကြားတော့. မအော်ဖို့ လာသတိပေးတယ်..။ ရန်သူက အသံကြားတဲ့နေရာကို ခွင်းဗုံးလို လက်နက်တွေနဲ့ ပစ်တတ် တယ်တဲ့။ ကျနော်တို့လည်း ဆက်အော်ချင်ပေမဲ့ ရပ်လိုက်ကြတယ်..။ အလကားသက်သက်တော့ ရန်သူ့ အသတ် မခံနိုင်ဘူးလေး..၊ သင်ခန်းစားတခုလည်း ရလိုက်ပါတယ်..။ အသံပေးရင် ရန်သူ့ကို ပစ်မှတ်ပေး သလို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ..။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပစ်ခတ်ရင် နေလည်ထမင်းစားချိန်ရောက်လာတော့ ကိုယ့်အတွဲလိုက် တယောက်ပစ်နေတဲ့ အချိန် တယောက်ထမင်းစားပေါ့..ရေဗူးထဲကရေနဲ့ လက်ကိုဆေး.. ထမင်းထုပ်ကိုဖြေ.. တက်သုတ်ရိုက်ပြီး အမြန်စား။ ပြီးရင် ဘောင်ဘီးနဲ့ လက်သုတ်လိုက်တာပဲ..။ တခါတလေ အရေးကြီးရင် ထမင်းစားတာကို ရပ်ထားပြီး ထပစ်ရသေးတယ်။
သူတို့ရဲ့နောက်တန်းကို ပြန်ဆုတ်သွားပြီး နောက်နေ့အတွက် ပြန်စုဖွဲ့မှုလုပ်မှာပါ။ ကျနောတို့လည်း တိုက်ပွဲကပြီးသွား..။ ကိုယ်လည်းနိုင်လိုက်တော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဒီနေ့တနေ့တာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြီး နောက်ပြောင်ရီကြပေါ့…။ ဥပမာ..ကျည်ဖြည့်တာ..ကျည်ဘောက်ထဲကို ကျည်ဆန်ပြောင်းပြန်ဖြည့်မိတာတို့…၊ ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းထဲမှာ ချော်လဲတာတို့…၊ ရီစရာ တွေ့တော့ ရီပေါ့လေ။
စိတ်မကောင်းစရာတခုက ဒီနေ့တိုက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေ တယောက်မှ ကျဆုံးမှု မရှိပေမဲ့ ရန်သူရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့် ကျောင်းသားထဲက အေးကို၊ ကျော်ဝင်း၊ ဒေဗစ်ပေါလ် ..အပါအ၀င် ၄…၅ ယောက်လောက် ဒဏ်ရာရသွားကြောင်းသိရတယ်။ အေးလေး..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်နေ့တိုက်ပွဲ အတွက် အားမွေးရအုံးမှာပေါ့..မသေမချင်းပေါ့လေ….။